MMALITE: MMEKỌRỊTA NCHỊKỌTA DATA NCHEKWA DATA - MMALITE - 2019
Ngwọta nke njekọrịta mmekọrịta data na ígwé ojii malitere
Omume a na-eme ugbu a iji mepụta nchekwa igwe ojii nke ndị ọrụ 'data nke onwe ha na-emekarị ka nsogbu karịa ohere ọhụrụ. Otu n'ime ihe nlereanya kachasị mma bụ Mmalite, ebe ị nwere ike mgbe ụfọdụ ịchọta njehie mmekọrịta na igwe ojii. A ghaghị idozi nsogbu a, ma ghara ikwado ya.
Ihe kachasị mkpa nke njehie ahụ
Onye na-esite n'aka ya na-echekwa data njirimara banyere egwuregwu na ebe abụọ n'otu oge - na PC onye ọrụ ya, nakwa na nchekwa igwe ojii. Oge ọ bụla ị malitere, a jikọtara data a iji guzobe egwuregwu. Nke a na - ezere ọtụtụ nsogbu - dịka ọmụmaatụ, ọnwụ nke data a na igwe ojii na PC. Ọ na-egbochi data ịbanye na ha iji tinye ego, ahụmahụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ bara uru na egwuregwu.
Otú ọ dị, usoro mmekọrịta nwere ike ịda. Ihe kpatara nke a - otutu, otutu n'ime ha ga-agbada n'ime ala. N'oge nsogbu ahụ bụ nsogbu kachasị maka egwuregwu Egwu 1, ebe njehie na oge ndị a na-apụtawanye mgbe mgbe. N'ikpeazụ, a pụrụ ịmata ọtụtụ ihe dịgasị iche iche na omume dị iche iche iji merie njehie ahụ.
Usoro 1: Ntọala ndị ahịa
Iji malite bụ ịgbalị ịhọrọ onye ahịa. E nwere ọtụtụ usoro nwere ike inyere aka.
Akpa, ị ga-agbalị ịnwapụta beta version nke onye ahịa.
Iji mee nke a, họrọ ngalaba na mpaghara elu nke windo ahụ "Mmalite"na mgbe ahụ "Ntọala Ngwa".
Na oghere mepere emepe ka ị gafere ruo isi "Nsonye na nyocha nke beta nke Mmalite". Ọ ga-agbanye ma maliteghachi ya site na onye ahịa.
Ọ bụrụ na ọ dị na ya, mechie ya ma malitegharịa.
N'ọnọdụ ụfọdụ ọ na-enyere aka. Ọ bụrụ na ọghị arụ ọrụ, mgbe ahụ ọ bara uru na-agbalị iji gbanyụọ synchronization na ígwé ojii.
Iji mee nke a, gaa "Ọbá akwụkwọ".
N'ebe a ị ghaghị ịpị aka na egwuregwu ahụ achọrọ (na ọtụtụ mgbe, nke a bụ Ogbe 1 n'otu oge) wee họrọ nhọrọ "Njirimara egwuregwu".
Na mpio nke meghere, gaa na ngalaba "Nchekwa Data na Ígwé ojii". N'ebe a, ị ga-ewepụ ihe ahụ "Kwado nchekwa igwe ojii na egwuregwu niile akwado". Mgbe nke ahụ gasịrị bọtịnụ dị n'okpuru. "Weghachite Chekwa". Nke a ga-eme ka eziokwu ahụ bụrụ na onye ahịa agaghịzi eji ígwé ojii ahụ, data ndị echekwara na kọmputa ga-eduzi ya.
N'ebe a, ọ dị mkpa ịkọ tupu oge eruo banyere nsogbu. Usoro a dị ezigbo mma maka ndị ahụ mgbe onye ọrụ ahụ kwenyesiri ike na ọ bụ na kọmputa ya ka ọ ga-adabere ma mara na data ahụ agaghị efu. Ọ bụrụ na nke a emee, a ga-ahapụ onye ọkpụkpọ ahụ n'enweghị ọganihu ọ bụla na egwuregwu. Ọ kachasị mma iji obere ihe a ruo mgbe onye ọzọ ga-emezigharịa ya, mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-agbalị ịnweta nkwurịta okwu na igwe ojii ọzọ.
A na-atụ aro ka ị jiri usoro a na ebe ikpeazụ - mgbe niile, nke a kọwara n'okpuru ebe a.
Usoro 2: Net Reinstall
Nsogbu nwere ike ịdina na njedebe nke onye ahịa. I kwesiri igbali ya.
Ịmalite bụ iji kpochapụ ihe ndozi ahụ. Iji mee nke a, lee adreesị ndị na-esonụ na kọmpụta (nyere maka nhazi dịka ụzọ nhazi):
C: Ọrụ Aha [Aha njirimara] AppData Obodo Na -
C: Ọrụ Aha [Aha njirimara] AppData
Mgbe ahụ, ị ​​ga-amalite ahịa. Mgbe ị nyochachara faịlụ ahụ, ọ ga-arụ ọrụ dị ka ọ dị na mbụ, mana ọ bụrụ na echere njehie ahụ, mgbe ahụ, mmekọrịta ga-ewere ọnọdụ na-ejikarị.
Ọ bụrụ na nke a anaghị enyere aka, mgbe ahụ, ị ​​ga-ewepụ onye ahịa ahụ, wee wepuchaa ihe niile gbasara mmalite nke kọmputa. Iji mee nke a, gaa na nchekwa ndị na-esonụ wee wepụ ihe niile ederede na onye ahịa n'ebe ahụ:
C: ProgramData Mmalite
C: ProgramData Electronic Arts EA Services License
C: Ihe omume Mmemme Na -
C: faịlụ mmemme (x86)
Mgbe nke ahụ gasịrị, ịkwesịrị ịmalitegharịa kọmputa ma wụnye usoro ahụ ọzọ. Ọ bụrụ na nsogbu ahụ kpuchiere ahịa, ugbu a ihe nile ga-arụ ọrụ dịka o kwesịrị.
Usoro 3: Net reboot
Ezi ọrụ nke onye ahịa nwere ike igbochi usoro dị iche iche nke usoro ahụ. Kwesịrị ịchọpụta eziokwu a.
Mbụ ị ga-emepe usoro iwu ahụ Gbaa ọsọ. A na-eme nke a na isi nchikota "Merie" + "R". N'ebe a, ị ga-etinye iwu ahụmsconfig.
Nke a ga-emeghe usoro kọwapụtara. Ebe ị ga-aga tab "Ọrụ". Nkebi nke a na-enye usoro usoro ọrụ niile. Họrọ nhọrọ "Unu egosiputa usoro Microsoft", ka ị ghara gbanyụọ ọrụ ọrụ dị mkpa, wee pịa "Gbanyụọ niile". Nke a ga-akwụsị ịkwụsị ọrụ niile dị n'akụkụ nke a na-anaghị achọ maka iji ọrụ nke usoro ahụ. Nwere ike pịa "OK" ma mechie windo.
Ọzọ ị ga-emeghe Njikwa Task nchịkọta ọnụ "Ctrl" + "Ịgbanwe" + "Esc". N'ebe a, ị ga-aga ngalaba "Mmalite"olee ebe mmemme niile na-agba ọsọ na mmalite usoro. Ị ghaghị ịkwụsị ọrụ niile, ọbụlagodi na ụfọdụ n'ime ha na-anọchite anya ihe dị mkpa.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ịkwesịrị ịmalitegharịa kọmputa ahụ.
Ugbu a, PC ga-amalite site na obere ọrụ, usoro ihe ndị kachasị mkpa ga-arụ ọrụ. O siri ike iji kọmputa na steeti dị otú ahụ; ọ gaghị ekwe omume ịrụ ọtụtụ ọrụ. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na ọtụtụ usoro agaghị arụ ọrụ, ọ bara uru na-agbalị ịmalite Mmalite.
Ọ bụrụ na enweghi nsogbu na steeti a, ọ ga-akwado eziokwu ahụ na ụfọdụ usoro usoro na-egbochi mmekọrịta n'etiti data. Ị ga-arụ ọrụ kọmputa ahụ ọzọ site n'ịme ihe niile dị n'elu n'elu usoro azu. Mgbe a na-eme ihe ndị a, ị ga-anwale iji usoro nke ịchọta ịchọta usoro nke na-egbochi ma gbanyụọ ya kpamkpam, ma ọ bụrụ na o kwere omume.
Usoro 4: Ihichapu cache DNS
Nsogbu ahụ pụkwara ịdaba na arụ ọrụ na-ezighị ezi nke njikọ Ịntanetị. Nke bụ eziokwu bụ na mgbe ị na-eji Intanet, ozi niile anabatara na-eleba anya na usoro iji wee nweta ohere data n'ọdịnihu. Dị ka ihe ọ bụla ọzọ, cache a ji nwayọọ nwayọọ jupụta wee ghọọ nnukwu snowball. Ọ na-emetụta ma usoro ahụ ma àgwà njikọ ahụ. Nke a nwere ike iduga nsogbu ụfọdụ, gụnyere mmekọrịta data nwere ike ime na njehie.
Iji dozie nsogbu ahụ, ịkwesịrị ihichapụ cache DNS ma malitegharịa nkwụnye ihe nkesa.
Ị ga-achọ mepee protocol ahụ Gbaa ọsọ Nchikota "Merie" + "R" ma tinye iwu n'ebe ahụcmd.
Ọ ga-emeghe "Iwu iwu". N'ebe a, ị ga-etinye iwu ndị na-esonụ n'ime usoro nke enyere ha. Nke a kwesịrị ịbụ ikpe-echezi, na-enweghị njehie, na mgbe ọ bụla iwu ịkwesiri ịpị "Tinye". Ọ kacha mma ka ichikota na mado site na ebe a.
ipconfig / ntọhapụ
ipconfig / megharia
netsh winsock nrụpụta
netsh winsock reset katalọgụ
netsh interface nyochaa niile
ntinye redress reset
Mgbe iwu ikpeazụ, ị nwere ike mechie njikwa ahụ wee malitegharịa kọmputa ahụ.
Ugbu a ịntanetị kwesịrị ịmalite ịrụ ọrụ nke ọma. Ọ bara uru ịnwa ọzọ iji onye ahịa ahụ. Ọ bụrụ na mmekọrịta na mmalite nke egwuregwu ahụ na-eme n'ụzọ ziri ezi, nsogbu ahụ na-adaba na arụmọrụ na-ezighi ezi nke njikọ ahụ ma ugbu a edozila nke ọma.
Usoro 5: Nchedo Nche
Ọ bụrụ na ihe niile dị n'elu agaghị enyere aka, mgbe ahụ, ị ​​ga-anwale ilebanye anya ntọala nchebe. Ụfọdụ ọrụ nchebe kọmputa nwere ike igbochi onye nwe ahịa nweta ohere njikọ Ịntanetị ma ọ bụ faịlụ faịlụ, n'ihi ya, ị ga-anwa ịgbakwunye Mmalite na nnyefe firewall ma ọ bụ gbalịa igbochi nchebe nwa oge.
Gụkwuo: Otu esi gbakwunye usoro ihe omume iji wepu nje virus
Otu ihe a na-emetụta nje. Ha nwere ike na-akpata nsogbu ma ọ bụ n'ụzọ na-apụtaghị ìhè na njikọ ahụ, ya mere a gaghị arụ ọrụ mmekọrịta. N'ọnọdụ dị otú ahụ, dị ka ihe ọ bụla ọzọ, nyocha zuru ezu nke kọmputa gị maka ọrịa ga-eme.
Gụkwuo: Otu esi elele kọmputa gị maka nje
Tụkwasị na nke ahụ, ọ bara uru ịlele faịlụ ndị agha. Ọ dị na:
C: Windows System32 ọkwọ ụgbọala na wdg
Ikwesiri ijide n'aka na enwere otu faịlụ nke nwere aha a, na aha adighi eji akwukwo Cyrillic. "O" kama Latin, na faịlụ ahụ enweghị oke ama (karịa 2-3 kb).
Ị ga-achọ mepee faịlụ ahụ. A na-eme nke a site na iji Notepad. Mgbe ị na-agbalị ime nke a, usoro ahụ ga-enye nhọrọ nke usoro ịme ihe ahụ. Achọrọ ịhọrọ Notepad.
N'ime faịlụ ahụ enwere ike ịdị na-efu efu, ọ bụ ezie na ọkọlọtọ dị ma ọ dịkarịa ala nkọwa nke nzube na ọrụ nke ndị agha. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ eji aka ya megharịa faịlụ ahụ ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla ọzọ, mgbe ahụ, mezue ịdị ọcha n'ime kwesịrị ịkwalite mkparị.
Na mgbakwunye, ịkwesịrị ịlele na mgbe ịkọwachara ọrụ ahụ (akara ọ bụla a na akara ya "#" na mmalite) enweghi adreesị. Ọ bụrụ na ha bụ, ị ga-ewepụ ha.
Mgbe nhichaa faịlụ ahụ, chekwaa mgbanwe ndị ahụ, wee mechie ndị agha ahụ, jiri aka nri pịa ya ma gaa "Njirimara". N'ebe a, ị ga-ahọrọ ma chekwaa oke "Naanị gụọ"ka usoro ndị ọzọ wee ghara idozi faịlụ ahụ. Ọtụtụ nje virus nke oge a nwere ikike iwepụ nke a, ma ọ bụghị ihe niile, yabụ na ọ dịkarịa ala ụfọdụ n'ime nsogbu ndị ọrụ ahụ ga-azọpụta.
Ọ bụrụ na mgbe niile aghachịrị, Mmalite ga-arụ ọrụ dị ka o kwesiri, nsogbu ahụ bụ n'ezie na ntọala nche ma ọ bụ na ọrụ nke malware.
Usoro 6: Na-ebuli kọmputa gị
Ọtụtụ ndị ọrụ na-akọ na ịmepụta arụmọrụ kọmputa site na ịmepụta ya na-enyerekarị aka ịnagide nsogbu ahụ. Iji mee nke a:
Wepụ ihe omume na egwuregwu na-adịghị mkpa na kọmpụta. Otu ihe a na - emetụtakwa ihe ndị na - enweghị mkpa - karịsịa foto ndị dị elu, vidiyo na egwu. Ikwesịrị ịhapụ ohere dị ka o kwere mee, karịsịa na mgbọrọgwụ disk (nke a bụ nke a wụnye Windows).
O kwesiri ikpochapu ihe omuma. Maka nke a, ọ bụla ọkachamara ọkachamara. Dịka ọmụmaatụ, CCleaner.
Gụkwuo: Otu esi ehichapu ihe mkpofu site na iji CCleaner
Iji otu CCleaner ahụ kwesịrị idozi njehie ndekọ ụlọ ọrụ. Ọ ga-emekwa ka ọrụ kọmputa dịkwuo mma.
Hụkwa: Otu esi edozie ndekọ ahụ site na iji CCleaner
Ọ gaghị abụ ihe na-ezighị ezi ka a ghara imebi ya. Na usoro ọrụ arụmọrụ siri ike na ọrụ dị ukwuu na ngwa dị iche iche, òkè ọdụm nke faịlụ na-eme ka e kewaa ma ghara ịrụ ọrụ dịka ha kwesịrị.
Gụkwuo: System Defragmentation
Na njedebe, ọ gaghị adị oke mma iji kpochapụ usoro ahụ n'onwe ya, dochie ihe mgbochi ọkụ ma wepụ ihe niile mgbochi, ájá, na ihe ndị ọzọ. Nke a na-arụ ọrụ dị mma.
Ọ bụrụ na enwebeghị ike iji kọmputa rụọ ọrụ ruo ogologo oge, mgbe ahụ mgbe usoro dị otú ahụ gasịrị, ọ pụrụ ịmalite ịmalite.
Usoro 7: Lelee Ngwaọrụ
N'ikpeazụ, ọ bara uru ịtụle ngwa ndị ahụ ma mee ụfọdụ manipulations.
Gbanyụọ kaadị netwọk
Ụfọdụ kọmputa nwere ike iji kọntaktị netwọk abụọ - maka wired na wireless Internet. Mgbe ụfọdụ ha nwere ike ịlụ ọgụ ma mee ka nsogbu dịrị njikọ ahụ. O siri ike ikwu ma nsogbu dị otú ahụ nwere mkpokọta zuru ezu, ma ọ bụ na ọ bụ njirimara maka mmalite. Ikwesiri igbapu kpoo ekwesighi ma malitegharia komputa.
Mgbe ụfọdụ, ị na-agbanwe adreesị IP nwekwara ike ime ka ọnọdụ ahụ dịkwuo mma site na njikọ ahụ na sistemụ mbụ. Ọ bụrụ na kọmputa gị na-eji IP dị omimi, mgbe ahụ, ị ​​ga-agbanyụ onye router maka awa 6. N'oge a, ọnụ ọgụgụ ahụ ga-agbanwe. Ọ bụrụ na IP dị oke, ị ga-achọ ịkpọtụrụ onye na-eweta ya na arịrịọ iji gbanwee nọmba ahụ. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ amaghị kpọmkwem ihe IP ya bụ, ọzọkwa, ozi a nwere ike ịnye ya.
Ndị ọrụ ụfọdụ na-akọ na mgbe ha na-eji ọtụtụ RAM, ọ na-enyere ndị mmadụ aka ka ha jiri aka ha. Ihe a na - esiri ike ịsị, ma ọ bara uru iburu n'obi.
I nwekwara ike gbalịa ịlele ọrụ nke onye ntanetị ma gbalịa ịtọgharịa ngwaọrụ ahụ. I kwesịkwara ịlele arụmọrụ zuru ezu nke Ịntanetị - ma eleghị anya nsogbu dị na ya. Ọ dị mma ilele iguzosi ike n'ezi ihe nke eriri, dịka ọmụmaatụ. Ọ gaghị abụ nnukwu ihe ịkpọtụrụ onye na-eweta ma jide n'aka na netwọk na-arụ ọrụ ọ na-arụkarị, ọ dịghịkwa ọrụ arụmọrụ a na-arụ.
N'ụzọ dị mwute, ọ dịghị ihe ngwọta zuru ụwa ọnụ na nsogbu ahụ n'oge ahụ. Ịkwụsị iji nchekwa ígwé ojii nyere aka n'ọtụtụ ọnọdụ, ma ọ bụghị ngwọta dị mfe, n'ihi na ọ nwere ihe ndabara dị egwu. Ihe ndị fọdụrụnụ nwere ike inye aka ma ọ bụ na nke ọ bụla, ya mere ọ bara uru ịnwale. N'ọtụtụ ọnọdụ, nke a ka na-eduga n'ịmeri mmeri kachasị mma, ihe niile na-adịkwa mma.
https://termotools.com ig.termotools.com © Mmalite 2019